Okwethu Izici ku-.
I-Rayson Global Co., Ltd ibhizinisi elihlanganyelwe le-Sino-US, elisungulwe ngo-2007 eliseShishan Town, eFoshan High-Tech Zone, futhi lihleli eduze kwamabhizinisi adumile njengeVolkswagen, iHonda Auto neChimei Innolux.
Siyathembisa ukuthi imikhiqizo ithunyelwa kumakhasimende ephephile futhi ezwakala. Uma unemibuzo noma ufuna ukwazi okwengeziwe nge yethu, sishayele ngqo. Kuze kube manje, uRayson udlulise isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi yamazwe omhlaba jikelele. Yonke imikhiqizo kubandakanya umkhiqizo wethu omusha inikezwa nge-design entsha, ikhwalithi eqinisekisiwe, namanani entengo wokuncintisana. Ngemigqa ephelele yokukhiqiza nabasebenzi abanolwazi, uRayson angakwazi ukuzimela, athuthukise, akhiqize, futhi avivinye yonke imikhiqizo ngendlela esebenza kahle.
Omatilasi bakho kufanele bahlale isikhathi esingakanani? Njalo umatilasi wehlukile. Uma uphonsa ebusuku noma uvuka ubuhlungu sekuyisikhathi sokuthola umatilasi omusha kungakhathalekile ukuthi umdala kangakanani. Sincoma ukubheka umaki womthetho bese sishintsha okungenani njalo eminyakeni eyisishiyagalombili.Ungangisiza yini ukuthi ngizenzele noma ngisebenzise i-logo yami kulo mkhiqizo? Singenza umatilasi ngokusho komklamo wakho noma sinikeze insizakalo ye-OEM nje udinga ukuthi usinikeze umkhiqizo wakho wobuciko noma i-logo photos.May ngivakashele imboni yakho? Yebo, wamukelekile ukuvakashela imboni yethu nganoma yisiphi isikhathi, siseduze nesikhumulo sezindiza saseGuangzhou Baiyun, kungathatha ihora elilodwa ngemoto, futhi singahlela imoto ukukuthatha.